Qiso Cajiib ah “Jaceylkii Safarka Geerida Galay” | Gaaloos.com
Home » jaceyl » Qiso Cajiib ah “Jaceylkii Safarka Geerida Galay”
Qiso Cajiib ah “Jaceylkii Safarka Geerida Galay”
Waa kaligii. Wuxuu u fakarayaa si ba’an, mowjaddiisu meel qudha ayay taagan tahay inay ka dhaqaaqdana waabay diidday! Waxaa ag yaalla miis iyo koob uu shaahii ka dhammaystay saacad ka hor oo quraanyo ku dul wareegayso iyo dhalo faanto ah oo kala baran. Illaa iyo xilligaana isagu xal uma helin fikirka maskaxdiisa ka socda.
Maalmo ka hor ayuu fahmi waayay hab dhaqanka qofka uu dunida ugu jeclaa, gacalisadiisa oo la soo baxday fikir sirgaxan, fikir khaldan, dhanna iyada kala saxsan isagase gebi ahaanba la khaldan. Si dhab ah ayuu u jecelyahay sidaa awgeedna inay dhibi soo gaarto ma rabo, rafaad iyo silicna lama jecla, balse fikir kala duwanaanshuhu marar badan ayuu kala kexeeyaa dad aad isugu dhow. Isagu dooni mayo inuu haatan gacalisadiisa ka talo baxo balse wuxuu ka fikirayaa waxa kaga iman kara howshan ay waddo. Waa howshee? Howl halis ah, safar dhib badan dheef in laga heloyana anay cidi kuu ballan qaadayn! Safar dhalinyaradu aad iyo aad u galaan, badankoodna kuba khasaaraan ama jidkaba ku Allaysta.
Barkhad waxaa maalin hore u timid Hani oo u sheegtay war uusan ku farxin; kaasoo ah inay galayso safar tahriib ah, inay ka tagayso kaliya kamuunan nixine wuxuu ka naxay dhibta ka imaan karta safarka gudhiisa, waa safar laga gudbayo waddan ama waddamo badan, bad iyo saxaro lama degaan ah, safar ku adag ninka ragga ah dumar iskaba daaye. Barkhad wuxuu isku dayay inuu waaniyo kuna qanciyo dalkeeda hooyo balse nin meeli u caddahay meeli ka madow. Wuu ka quustay. Maadaama uu aad u jecelyahay Hani wuxuu ka baqayaa inay safarkaa dhibi uga timaaddo ama aysanba ku guulaysan hadafkiisa, xilligan uu keligii fakarayo wuxuu fadhiyaa kafateeriyada taasoo ah meel deggan kuna fiican fakarka kalinimada ah iyo go’aan gaarista.
Hadaba Barkhad wuxuu dhex maquurtay mowjado afkaar ah oo midiba mid ka danbayso, jirkiisa un baa meesha joogay maahee miyir ahaan aad buu u maqnaa, isagoo fikirkiisii wata ayaa waxaa la hadlay damiirkiisa oo waydiiyay su’aalo dhowr ah, markii hore jawaab uma helin mar danbe ayuuse u jawaabay haatufkii la hadlayay ee wax warsanayey wada hadalkoodiina wuxuu u dhacay sidatan:
Naftan habaqla joogtiyo
Hal aqoon mudh baxayoow
Waa maxay harraadkani?
Maxaa howd ku geeyoo
Hani hoodaley iyo
Kugu direy hashaadoo
Yaa cunay halkaagii?
Iyo hoga tuskaagii
Hadmuu meel cidlaa iyo
Tagay haro an lo dirin???
Hubaal weeye ereyguye
Rabbi baa hidaayada
Nabsi hore u jiray oo
Holac hore miyaa jiray??
Garan waayey hootadu
Dhanka ay ka huruddee
inan hoobalow sheeg????
I dareemayow hoo
Hiyi kicisay laabtoo
Hogol iyo daruur iyo
Iyo hanad dhibkii helay
Ila garan hannaankee
Hilbahaygi baad tahay
Hebel ila damqada iyo
Ina hooyo wiiloo
Ila haajiraad tahay!
Hal abuurka maansada
Aan kuu hal celiyee
Harraadkani wuxuu yahay
Wax haleelay laabtoo
Hurgun iyo dhib badanoo
Jacayl hodana weeyaan!!
Qofka aan hankaygiyo
Suu u heetinaayee
Waxa howd I geeyee
kali haro I seexsheen
ugu heesayaa waa
nafta taan u hurayee
kalgacayl had jeer
ugu habayay kaligeed
baa howlo kale iyo
gashay heer an garanoo
kama harin wanaagii
axdigii ma heeryeyn
wacadkii ma hiifoo
waligay had iyo jeer
kaalay hab isiiyoo
ila hano jacaylkaan
kuu hibeeyey gacalooy!
Iyo hoga tuskaygii
Hadday meel cidlaa
Aaday heer an loo dirin
U hayee adoomaha
Ina sii hannaan wacan
Hayaan iyo dhib baas iyo
Nafta holac ha siinine
Ila hano jacaylkoo
Haqab li’I mushaaxoo
Kaalay gacalo honeyeey
Ha hilmaamin wacadkii
Hammigeennu yuu burin!!!!!
Alla maxaad gabyaa tahay! Buu ku baraarugay markuu jalleecayba wuxuu garabkiisa ka arkay Hani oo soo ag fariisatay maqlaysayna maansadii uu marinayay. Way qoslaysaa oo farxad wayn baa ka muuqata, shaki baa ka galay nooca ay tahay farxadda ka muuqata waxyna ku tidhi “Gacaliye maanta wax aad dunida ugu jeclayd baan kuu wadaa” Haye ii soo sheeg macaanto buu ugu warceliyay, waxay tidhi
“Muxuu dhoof habeeyaa
Ama uu hagaajaa
Miyuu hanad kalkaalaa
Mise wuu hogeeyaa
Imisuu hog beeniyo
Haadaan ku tuuroo
Misna diinta hodankaa
Hareer mariyay gabigigood
Habeen iyo dharaartii
Hadalkaad I tiriyee
“Hayaan iyo dhib baas iyo
Ayaan haatan yeeloo
Ka shaqayn hubaaloo
Hanfi iyo tahriib iyo
Aadi mayo holacee
Hareertaada iga eeg!
Honey waan ku jecelahay!
Barkhad dhakafaar baa ka soo haray! Mar wuxuu la yaabbanaa siday inantu u hal-abuurtay marna hannaankay ugu luuqaysay waxaase isku fuuqsaday waxaasoo dhan nuxurka ay xanbaarsanaayeen ereyadu ee tilmaamayey baaqashadeeda. Wuxuu u holladay inuu hadlo. Hadaba akhiriste hadaad adigu ahaan lahayd barkhad maxaad ku oran lahayd hani? Ama aad ugu jawaabi lahayd?
W/Q:- Fanax Fariid
Title: Qiso Cajiib ah “Jaceylkii Safarka Geerida Galay”
Posted by Unknown, Published at 9:00 PM and have 0 comments